Company Info - Ningbo WEDAC Point ny Sale Display Co., Ltd
Inquiry ny paika
NBN-Cosmetic marika ao Aostralia
TD Asehoy Pusher for vitamina Box
Automatic Self-manosika System Fihetsiketsehana
Maro loko Acylic Display
Material hafa Display
Price Label mpihazona ny hook
PVC karatra mpihazona
Tsindrona novolavolaina Part
Zava-mahadomelina tena mandeha ho azy pusher Display
Ho-up-tena mandeha ho azy pusher Display
Ningbo WEDAC Point ny Sale Display Co., Ltd. dia mpanamboatra manokana eo amin'ny famolavolana, fampandrosoana sy mamokatra fivarotana antsinjarany Asehoy ny fitaovana isan-karazany ao anatin'izany ny faritra samy hafa karazana tarehy, fikarakarana ara-pahasalamana-andE-sigara orinasa. Any amin'ny faritanin'i Zhejiang Ningbo ny, dia mifandray akaiky ny malaza ny rano lalina-Port-Beilun seranana, soa avy amin'ny fitaterana mety Network.
Manaraka ny raharaham-barotra filozofian'ny ny fandreseny-fandreseny ny fiaraha-miasa, ny pragmatisma enti sy ny zava-baovao sy misambo-tena tsara, WEDAC dia natokana mba hanomezana endrika matihanina, avo-kalitao ny vokatra sy ny fiheverana fanompoana. Mihoatra ny 10 taona, ny vokatra efa naondrana any Aostralia, Japana, Etazonia sy ireo firenena Eoropeana ary efa nahavita maro ampitan-dranomasina tetikasa ho an'ny mpanjifa avy amin'ny faritra samihafa. WEDAC maniry hametraka fifandraisana amin'ny mpanjifa mpiara-miasa, na ao an-trano sy any ivelany, ary miaraka mba hamorona ny antony lehibe.
isika dia mpanamboatra manokana amin'ny famolavolana, fampandrosoana sy mamokatra fivarotana antsinjarany Asehoy ny fitaovana isan-karazany ao anatin'izany ny faritra samy hafa karazana tarehy, fikarakarana ara-pahasalamana-andE-sigara orinasa.
Ataovy miavaka ny Product